Uyenza njani iPin egqibeleleyo kwiPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Iinethiwekhi zentlalo ziye zaba yenye yeendlela zeenkampani zentengiso, iPinterest yenye yezona zidumileyo xa kuziwa kulo mba, isizathu kukuba iinkampani, ngakumbi iivenkile ezibonakalayo Banokubonisa umxholo okanye iikhathalogu ezibonakalayo kwaye ngale ndlela batsale abasebenzisi besi sicelo kumaphepha abo ewebhu.
Enye yeendlela esi sicelo ekubonelela ngayo ekutsaleni abathengi abanokubakho zizikhonkwane, kwiibhodi ezithile, kodwa ayisiyo nje isikhonkwane okanye umfanekiso, hayi! Olu papasho kufuneka lube semgangathweni kwaye lubonise imveliso yakho ngeyona ndlela inomtsalane. Okulandelayo, siza kukunika iingcebiso onokuzisebenzisa ukwenza oku.
Into ekufuneka unayo:
Yiba neakhawunti yeshishini Linyathelo lokuqala lokuthengisa iimveliso zakho kwesi sicelo, akonelanga ukuba neprofayili yakho.
Xa uthengisa kweli qonga, kufuneka iwebhusayithi yakho idityaniswe kwisicelo, ngale ndlela abathengi ababona izikhonkwane zakho baya kuba nokhetho lokundwendwela iwebhusayithi yakho.
Ngokubhekisele kwiibhodi, Kuya kufuneka uzilungiselele ngeyona ndlela ifanelekileyo, uhlala ucinga ngeethagethi ofuna ukuyitsalela kwinkampani yakho.
Amagama aphambili onokuwafumana iwebhusayithi yenkampani yakho ibaluleke kakhulu, Kuya kufuneka ubabandakanye kwizithuba eziphambili zeebhodi zakho.
Oko kuya kufuneka ukuqaqambisa:
Umxholo womgangatho unentsingiseloAwunakho ukulayisha nawuphina umfanekiso, kufuneka ulayishe izikhonkwane eziyilelwe usukelo lwakho, khumbula ukuba inqaku ngalinye linokuba lelabantu abanencasa ehambelana nezo bhodi.
Imifanekiso ayinakuba ntle njeKufuneka babe yimifanekiso ethetha into kuwe kwaye idluliselwe ebantwini ababonayo, oku kuya kuqinisekisa ukuba baya kukutyelela kwiwebhusayithi yakho.
Inkcazo oyinika i umfanekiso uluncedo olukhulu, Khumbula ukusebenzisa ulwimi olufanelekileyo olujolise kwithagethi ofuna ukuyibamba, ehlala inomdla, ungalibali ukufaka amagama aphambili ayimfuneko kwaye ungawahlukumezi.
Ukuba wenza inkcazo emfutshane, enomxholo ophezulu Ulwazi ngamagama aphambili abonisiweyo kunye nee-hashtag ezifanelekileyo uya kuba namathuba amaninzi okutsala abathengi abafanelekileyo kwiimveliso zakho.
Yiba nabantu, Khumbula ukuba iPinterest sele inethuba lokuthumela kunye nokufumana imiyalezo, kwimeko apho umntu abhala ecela ulwazi oluthe kratya malunga naziphi na izikhonkwane zakho, yiba nobubele kwaye uziphathe kakuhle, ayisi kunika ulwazi kuphela, kukwazi ukunika ulwazi abathengi.
Bameme ukuba batyelele iwebhusayithi yakho, ihlala inobuhlobo kwaye inezimpawu ezichanekileyo nezicacileyo, injongo kukutsala abathengi abathembekileyo, abahlala bekutyelela kwaye bathenge iimveliso kwiphepha lakho.
Ekugqibeleni, Akufanele ulibale ukuba injongo kukuba bakutyelele kwiwebhusayithi yakho apho baya kubona iimveliso ezininzi kwaye ngamanye amaxesha umthengi oya komnye unokuthenga izinto ezininzi, kungenxa yesi sizathu sokuba iwebhusayithi yakho ihlale ilungelelaniswe kakuhle, iliso- ukubamba kunye nokuhlaziywa.
1 Into ekufuneka unayo:
2 Oko kuya kufuneka ukuqaqambisa: